Accueil > Gazetin'ny nosy > Manararao-paty: Hanaovana propagandy ny vokadratsy ny rivodoza AVA
Manararao-paty: Hanaovana propagandy ny vokadratsy ny rivodoza AVA
Hoan’ny vahoaka Malagasy tsotra dia fahavoazana tsy misy toa izany no nateraky ny fandalovan’ny rivo-doza AVA iny. Maro no potika fananana, maty havana, ary nanampy ny fahantrana izay efa nampitondrain’ny fanjakana ity ny vahoka ny fisian’izy iny. Mbola ny rivo-doza iray izay no nandalo ary efa hita sahady ny takaitra navelany. Na dia mbola tsy azo avokoa aza ny zavatra simba rehetra dia mazava hoazy fa toerana maro no mila fanampiana amin’izao fotoana izao.
Amin’ity taona 2018 izay hangotraka amin’ny fifidianana izay ho filoham-pirenena ity dia manome vahana sy tombony hoan’ny fitondrana amperinasa iny rivo-doza iny. Afaka manararao-paty manao fampielezan-kevitra mialohan’ny fotoana izy ireo noho izany.
Jereo fa tsy maintsy mandeha mihazo faritra maro manerana ny Nosy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny Praiminisitra ary ny antoko HVM (Hery vaovao hoan’i Madagasikara) manomboka izao. Hitondra fanampiana, hanao kabary politika, hilaza fa mijery vahoaka, ary hanindrahindra ny anaran’ingahy Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina amin’ny fanomezana hoan’ireo olona sy toerana mila izany.
Mpanao politika akaikin’ny fanjakana sy ny mpitondra amin’izao fotoana izao no milaza fa avy amin’ny ilaina azy izao zavatra izao satria mety amin’ny propagandy hoan’ny filoham-pirenena amperinasa tokoa.
Ny mpitondra fanjakana tokoa no afaka mizara fanampiana amin’izao fotoana izao. Na amin’ny alalan’ny BNGRC (birao manokana mahaleontena momban’ny ady voajanahary) izany na amin’ny alalan’ny fanampiana entin’ny vondrona iraisam-pirenena dia tsy maintsy ny fanjakana no lazaina fa manampy ny vahoaka amin’izany.
Ny zavamisy anefa dia volam-bahoaka no entiny anaovana ireny fanampiana ireny. Isika ve dia hino fa raha toa ka tsy nitondra firenena ny filoha Hery Rajaonarimampianina amin’izao fotoana izao na ingahy Praiminisitra Solonandrasana Olivier Mahafaly lehiben’ny governemanta dia nahafoy vola na fanomezana hoan’ireo traboina ireo? Maro ny loza efa nitranga teto amin’ny firenena izay ka inona no nataon’izy ireo fony izy ireo mbola tsy nitondra firenena? Mazava hoazy fa hisehoan’izy ireo indray ny volam-bahoaka, ny fahefana nomena azy ary hofitahina ny vahoaka Malagasy fa izy ireo no manao izao fanampiana izao.
Nahoana moa raha ataony amin’ny alalan’ny vahoaka Malagasy ireo fanomezana entiny ireo ka tafiditra ao avokoa ireo mpanohitra sy antoko politika isan-karazany izay tsy mitondra satria ny hetra avy amin’izy ireny ihany no entin’izy ireo manao izany fanampiana izany. Aza manararao-paty fa manody izany amin’ny fomban-tsika Malagasy.